टेलिभिजन अभिनेता एवं गायक करण माथि बलात्कारको झुटो आरोप लगाउने महिला पक्राउ – " कञ्चनजंगा News "
टेलिभिजन अभिनेता एवं गायक करण माथि बलात्कारको झुटो आरोप लगाउने महिला पक्राउ
No Comments on टेलिभिजन अभिनेता एवं गायक करण माथि बलात्कारको झुटो आरोप लगाउने महिला पक्राउ
एजेन्सी, ३ असार । टेलिभिजन अभिनेता एवं गायक करण ओवरोयमाथि बलात्कारको झुटो आरोप लगाउने महिलालाई पक्राउ गरिएको छ । भारतको मुम्बई प्रहरीले अभिनेता ओवरोयमाथि बलात्कारको झुटो आरोप लगाउने महिलालाई पक्राउ गरेको हो ।
करणलाई ती महिलाले मे ६ मा बलात्कार तथा ब्ल्याकमेल गरेको उजुरी दिएपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेका करणलाई एक महिनापछि अदालतले ६ जुनमा जमानतमा रिहा गरेको थियो ।
प्रहरीले ती महिलालाई झुटो उजुरी दिएको र आफैमाथि हमलाको षड्यन्त्र गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको जनाएको छ। पक्राउ परेकी ती महिलाले गत २५ जुनमा मोटरसाइकलमा आएका दुई जनाले आफूमाथि हमला गरेको र करणमाथि लगाइएको आरोप फिर्ता लिन धम्की दिएको बताएकी थिइन । सो समयमा उनले आफूमाथि एसिड हान्ने असफल प्रयासमसेत भएको जनाएकी थिइन् ।
प्रहरीले सो उजुरीका आधारमा केहि दिनपछि दुई व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको थियो ।
उनीहरू पक्राउ परेपछि पक्राउ परेका मध्ये एक ती महिलाका वकिलका नातेदार रहेको खुलासा भएको थियो । पक्राउ परेका ती दुबै व्यक्तिले महिलाकै योजनामा सो नियोजित हमला गरिएको र त्यसका लागि आफूहरूलाई १० हजार भारू दिएको बताएपछि ती महिलाको कर्तुत माहिर आएको हो ।
यो पनि पढ्नुहोस्ः समता अस्पतालमा युवतीको शव झुण्डिएको अवस्थामा फेला – बौद्धस्थित समता अस्पतालमा आज एक युवतीको शव झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेको छ । रामेछाप जिल्ला दोरम्बा घर भएकी सोही अस्पतालमा क्लिनरको काम गर्ने २७ वर्षीया विमला तामाङ अस्पतालमै झुण्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेकी हुन् । मृत फेला परेपछि आफन्तले अस्पताल परिसरमा तोडफोड गरेका छन् ।
तोडफोडपछि आक्रोशमा आएको भीडलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरी परिचालन गरिएको छ । महानगरीय प्रहरी वृत बौद्धका प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेन्द्र चन्दका अनुसार विगत दुई महीनादेखि यही अस्पतालमा काम गर्ने भन्ने बुझ्न आएको छ । शव परीक्षणपछि सत्यतथ्य रिपोर्ट आउने उहाँले बताउनुभयो । घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको समेत प्रहरी नायब उपरीक्षक चन्दले जानकारी दिनुभयो । रासस
← प्रनेश रिहा भएपछि एक मिडियामा अन्तर्वार्ता दिदै भनेका छन् – धन्यवाद मिलन चाम्स, तपाईँको झोँकले मलाई फेमस बनायो → आँखा फर्फराउँनु शुभ कि अशुभ ? कुन आँखा फर्फराउँदा के हुन्छ ? जानी राखौं